Will Apple pakupedzisira ichave nechiitiko chekuunza maMacs matsva? | IPhone nhau
Apple, Macs uye chiitiko chisingauyi
Kubata zvinogoneka chiitiko muna Gumiguru kuunza maMacs matsva ingoriwo runyerekupe rwave kuwana simba sezvo mavhiki apfuura. Runyerekupe rwuchiripo, sezvo Apple isati yabvisa kusahadzika kwechiitiko chekufungidzira chaizoitika svondo rinouya. Pachine nguva yeApple kutumira makokero, isu tinofanirwa kujaira kune pfungwa yekuti hapana chiitiko mwedzi uno, tichizvikwanira nekugadzirisa zvigadzirwa zvakananga pawebhusaiti yavo.
Kunyanya, ivo vanotarisirwa kuti vaone nhau muchikamu cheLaptop, kunyanya muPro renji, iyo isingazovandudzwa chete mukati, asiwo nekunze. Kana isu tikateerera kune zvatinoziva kusvika parizvino, tinogona kuona zvishoma dhizaini kugadziridzwa uye nyowani mavara (sezvazviri kutoitika muMacBooks), zvichidaro kupedzisa hegemony yehunhu hwesirivha grey.
Iko kutsakatika kweiyo Air renji chinhu chakafungidzirwa kwenguva yakareba: Uine MacBook yakaonda, zvirinani-zvirinani, ndeipi pfungwa yekuichengeta? Tichaona kana Apple ikafunga kuramba ichichengeta modhi yakave iconic pamusoro pemakore, nekuti Jobs akaiisa padanho nekuibvisa mukati meiyo envelopu yehofisi.
Kuve iyo modhi isina kuvandudzwa kwenguva refu, Mac Pro nyowani iri kutarisirwawo kuonekwa pachiitiko ichi. Mazhinji ndiwo marongero akakomberedza ichi chinotevera chizvarwa chemakomputa, uye mhinduro shoma dziripo panguva ino. Pachine hapana chechokwadi, saka isu tichava takateerera kune chero nhau dzinogona kumuka munguva pfupi uye dzinotipa imwe chiratidzo maererano nechiitiko chakamirirwa kwenguva refu uye icho, pakupedzisira, chingazombouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple, Macs uye chiitiko chisingauyi
Iyi kadhi yeiyo yako iPhone 7 inosanganisa yemagetsi inki skrini
Dzima haptic mhinduro pane iPhone 7